Xeerarka Xudduudda Cusub ee Soo -booqdayaasha Kanada: 10 Dawladood oo Mareykan ah ayaa gacmo furan ku soo dhaweyn doona dadka Kanada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Xeerarka Xudduudda Cusub ee Soo -booqdayaasha Kanada: 10 Dawladood oo Mareykan ah ayaa gacmo furan ku soo dhaweyn doona dadka Kanada
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • LGBTQ • Wararka Mexico • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dadka reer Meksiko iyo Kanadiyaanka ayaa hadda qorsheyn kara fasax Mareykan ah oo ay ku tagaan Mareykanka. Laga bilaabo Noofembar 1, Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa dib u furi doona dadka dhulka leh ee u dhexeeya deriska Mareykanka socdaalka aan muhiimka ahayn, oo ay ku jirto dalxiiska.
Aqalka Cad ayaa xaqiijiyey habeenimadii Talaadada in booqdayaasha si buuxda loo tallaalay oo ka yimid Kanada ay awoodi doonaan inay u safraan Mareykanka iyagoo ka gudbaya soohdinta dhulka laga bilaabo 1 -da Noofembar.
Lama cayimin tallaallada la aqbali doono ama haddii qiyaaso isku dhafan ay u qalmi doonaan.
Xuduudaha Mareykanka ee booqdayaasha Meksiko waxay furmi doonaan 1 -da Noofembar sidoo kale
Kuwa bixiya caddaynta tallaalka oo doonaya inay booqdaan qoysaska ama saaxiibbada ku imanaya dalxiis ahaan ama dukaameysta waxaa loo oggolaan doonaa inay mar kale soo galaan Mareykanka laga bilaabo Nofeembar.
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa xayiraadii saarnayd ee la midka ahayd ka qaaday dadka ajaanibta ah ee doonaya inay dalka uga safraan dibadaha, oo ay ku jiraan Yurub.
Isla qaadista xayiraadaha ayaa lagu dabaqi doonaa xuduudaha dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
Tani waa tallaabo soo dhaweyn leh oo dib loogu furayo Warshadaha Socdaalka iyo Dalxiiska Mareykanka ee Caalamiga ah.
Kahor masiibada sanadka 2019, waxaa jiray ku dhawaad ​​20.72 milyan oo soo booqday Kanada oo yimid Mareykanka.
In ka badan 4.1 milyan oo reer Kanada ah ayaa booqda Florida sannad kasta oo ay ku jiraan booqdayaal badan oo gaagaaban iyo shimbiro baraf badan oo jiilaal oo dheer.
In ka badan 3.1 milyan oo reer Kanada ah ayaa booqda New York sannad kasta. Soo jiidashada #1 waa dabcan Magaalada New York, Mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn adduunka, New York had iyo jeer waa dabayl dhaqdhaqaaq leh, oo leh goobo caan ah mar walba oo aan marna ku filnayn in la arko dhammaantood oo ay ku jiraan bandhigyada waddooyinka, heer caalami dukaamaysiga, Taalada Xorriyadda, Dhismaha Dawlad-goboleedka, Buundada Brooklyn, Beerta Dhexe, iyo matxafyo badan oo dunida caan ka ah.
In ka badan 2.5 milyan oo reer Kanada ah ayaa booqda gobolka Washington sanad walba iyagoo si sahlan u gala baabuur wadista oo xuduud la leh gobolka British Columbia. Seattle waa albaabka laga galo gobolka Waqooyi -galbeed ee Baasifigga, halkaas oo ah buuraha la yaabka leh eegi doona kaymaha roobka leh iyo xeebaha riwaayadaha. Laba jardiinooyin qaran, Mount Rainier iyo Olombikada, waxay bixiyaan kulanno la yaab leh oo dabiici ah sida San Juan Islands oo kale oo ka baxsan xeebta.
In kabadan 1.6 milyan oo reer Kanada ah ayaa booqda California sanad walba. Magaalooyinka firfircoon, xeebaha, jardiinooyinka madadaalada, iyo mucjisooyinka dabiiciga ah sida meel kale oo dhulka ka mid ah waxay California ka dhigaan dhul xiisa leh oo suurtagal u ah socdaalayaasha. Magaalooyinka laga soo galo ee San Francisco iyo Los Angeles waxay hoy u yihiin qaar ka mid ah goobaha ugu caansan gobolka, laga bilaabo Buundada Golden Gate ilaa Hollywood iyo Disneyland.
In ka badan 1.3 milyan oo reer Kanada ah ayaa booqda Nevada sannad walba, badankood waxay yimaadaan Las Vegas. Muuqaallada cajiibka ah ee Nevada waxaa inta badan hadheeyey dhaldhalaalka iyo dhalaalka magaalada ugu weyn, Las Vegas. Nevada waa gobol leh kala duwanaansho dabiici ah oo cajiib ah, oo leh meelo badan oo aad u wanaagsan oo aad ku booqan karto, wadooyin muuqaal dabiici ah, iyo fursado cajiib ah oo loogu talagalay waxqabadyada bannaanka ee jardiinooyinkooda qaran ee cajiibka ah iyo aagagga madadaalada.
In ka badan 1.3 milyan oo reer Kanada ah ayaa sannad walba booqda Michigan iyagoo socdaalayaal badan oo xagaaga ka soo jeeda Ontario. Michigan waa hoyga muuqaalka qurxoon, harooyinka haybadda leh, cunto aad u fiican, deegaanno qallafsan iyo dhagaxyo qarsoon. Dawladdan cajiibka ah waxay xuduud la leedahay 4 ka mid ah Harooyinka Weyn waxayna ka kooban tahay in ka badan 11,000 harooyin gudaha ah, oo ku baahsan jasiiradeeda hoose iyo sare taasoo ka dhigaysa meel kulul xagaaga dadka Kanada.
In ka badan 1 milyan oo reer Kanada ah ayaa sannad walba booqda Arizona oo ka soo booqdayaasha muddada gaaban ilaa shimbiraha barafka muddada -dheer. Wadnaha Koonfur -galbeed Ameerika, Arizona waxaa ka buuxa yaabab dabiici ah, magaalooyin firfircoon, iyo magaalooyin yaryar oo soo jiidasho leh. Dawladani waxay leedahay wax kasta oo ka socda Grand Canyon, dhagaxyada cas ee Sedona, waddan khamri ah, harooyin aan la rumaysan karin, socodka buuraha leh, buuraha barafka jiilaalka, dhacdooyinka isboortiga ee heer caalami ah iyo dabcan cimilada cajiibka ah.
In ka badan 800,000 oo reer Kanada ah ayaa booqda Hawaii sanad walba. Jasiiradaha Hawaii waxay caan ku yihiin dhul -gariirkooda adag ee dhagaxa, biyo -dhaca, caleenta kulaylaha iyo xeebaha leh dahab, casaan, madow iyo xataa ciid cagaaran. Sannadka oo ku dhow cimilada qumman oo leh hab -nololeed nasasho leh oo qurux badan ayaa ka dhigtay Hawaii inay u baxsato jiilaalka caanka ah ee Kanadiyaanka! Lixda jasiiradood ee gaarka ah waxay bixiyaan waaya -aragnimo gooni ah oo soo jiidan doonta socdaal kasta.
In ka badan 750,000 oo reer Kanada ah ayaa booqda Maine sanad walba. Qiyaastii mid ka mid ah lixdii qof ee booqda Maine waxay ka yimaadaan Kanada, iyada oo ku dhawaad ​​kala bar kuwa ka yimid Ontario. Gobolka Maine, oo lagu naanayso Vacationland, ayaa ka badan meel loo socdo, waa waayo -aragnimo kaa qaadi doonta neeftaada. Maine waxay soo dhaweysay wax kasta oo run ah, gaar ah oo fudud, kuna raaxaysanaya meelaha bannaan ee kaymaha qotada dheer ee gobolka iyo xeebta firfircoon.
In kabadan 680,000 oo reer Kanada ah ayaa booqda Pennsylvania sanad walba. Magaalooyinka casriga ah ee Pennsylvania iyo soojiidashada bannaanka ee weyn waxay kaa baryayaan inaad sahamiso hawlo aad u kala duwan. Waxaad arki kartaa Liberty Bell -ka caanka ah ee Philadelphia, waxaad ku socon kartaa raadkii geesiyaal Dagaalkii Sokeeye ee Gettysburg, ama waxaad ku dhex qooqan kartaa dhaqanka Madxafyada Carnegie ee Pittsburgh.